Gcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-97 kule mega yepakethi yeeflaya nangaphezulu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UManuel Ramirez | | itemplates, Ezahlukeneyo
Sinenye Isibonelelo esikhethekileyo seetemplate ezingama-250 kunye neekhompyuter zamakhadi oshishino, iiflaya kunye nokunye okuninzi onokuthi wonge ukuya kuthi ga kwi-1333 yeedola. Ipakethi mega yeetemplate ukuze ukwazi ukugubungela zonke iimfuno zabathengi abafuna ngenkani.
Ngamanye amagama, sithetha nge-megapack ethi iya kuba ngexabiso le- $ 1362, kodwa uza kuthini ngale ntengiso uya kuba nayo esandleni sakho iidola ezingama-29. Lilonke kukho iitemplate ze-195 zokuprinta kunye nee-mockups ezingama-55 onokuthi u-ewe kumthengi ocela uyilo oluthile.
1 Iimpawu eziphambili zale pakethi yeetemplate ezingama-250 kunye ne-mockups
2 Ipakethi yeeMockups ezingama-250 kunye neeTemplate zeFlyer nokunye: Ingxelo yoNyaka
3 Ipakethi yeeMockups ezingama-250 kunye neetemplate zeeflaya kunye nokunye: amakhadi oshishino
4 Ipakethi yee-mockups ezingama-250 kunye neetemplate zeeflaya kunye nokunye: ii-headers kunye neeflaya
5 Ipakethi yeeMockups ezingama-250 kunye neeTemplate zeFlyer kunye nokunye: iiKhadi leMockups
6 Ipakethi yeeMockups ezingama-250 kunye neetemplate zeeflaya kunye nokunye: iileta
7 Ipakethi yeeMockups ezingama-250 kunye neetemplate zeeflaya kunye nokunye: iiflaya zokuhambisa
Iimpawu eziphambili zale pakethi yeetemplate ezingama-250 kunye ne-mockups
Le megapack ibandakanya uyilo olwahlukileyo oluyi-195, ukusukela kwiiflaya, amakhadi oshishino nokunye okuninzi. Yongeza I-55 i-mockups enokwenziwa ngokwezifiso ngokupheleleyo apho unokutshintsha imibala, imvelaphi kunye nokubeka kwakhona zonke izinto ezibonakalayo. Ngale ndlela uya kuba nakho ukuziqhelanisa ngokugqibeleleyo neemfuno zakhe nawuphi na umxhasi kwaye unikeze ezinye iintlobo zeenkonzo kwabo kude kube ngoku bathintele utyalo-mali.
Ezi eziphambiliIimpawu zale pakethi yeetemplate ezingama-250 yokushicilela:
Iifayile ezili-195 kwiPSD ilungele ukuhlelwa ngeenjongo zakho zobungcali.
Amakhadi oshishino angama-59.
Iiflaya ezingama-106 zeshishini.
Ipakethi elungiselelwe ukusetyenziswa neAdobe Photoshop Cs5 okanye kamva.
Uququzelelwe kakuhle kumacandelo kunye namaqela ombala.
Izinto ze "Smart" ukufumana iifoto zakho ngokulula nangokulula.
Ukulungele ukuprinta kwifomathi yombala we-CMYK kunye nesisombululo se-300 dpi.
Kusetyenziswe iifonti zasimahla ngokupheleleyo kunye neefoto.
Las ezona mpawu ziphambili ze-mockups:
Iifayile ezingama-55 zePSD zikulungele ukuhlelwa.
Iipakethe ezi-3 zamakhadi eshishini eneetemplate ezili-15, iipakethi ezi-3 ezinemifanekiso engama-28, ii-mockups zokubhala ezi-7, izimemo ezi-5 kunye neeposikhadi.
Ungasebenzisa iAdobe Photoshop CS5 okanye ingxelo kamva.
Ngokugqibeleleyo ziququzelelwe ngamacwecwe kunye neekhowudi zombala ngokwamaqela.
Iifayile zizisombululo eziphezulu ukufikelela kuzo 3.000 x 2.000 pixels.
Ungasebenzisa izinto "ezikrelekrele" ukubeka ngokulula uyilo lwakho kwi-mockups nganye.
Njengoko unokuthelekelela, yi ipakethe epheleleyo kakhulu yeeflaya kunye namakhadi oshishino Ukuchaza zonke iintlobo zamacandelo njengoko siza kukuxelela ngokulandelayo. Ngokuba nenxalenye elungileyo yomsebenzi esele yenziwe, kuya kufuneka wenze ngokwezifiso ukuthotyelwa komthengi kwaye ke ubanike ukuze bajonge.
Ipakethi yeeMockups ezingama-250 kunye neeTemplate zeFlyer nokunye: Ingxelo yoNyaka
INgxelo yoNyaka ivumela ukuba sibe ne ikhava efanelekileyo yengxelo yonyaka yenkampani Kuluhlu olukhulu lwegrafu ukubonisa inqanaba lobuchwephesha kwinkampani osebenza nayo.
Isekwe kuyilo lwangoku nazo zonke iintlobo zeemilo, nangona kunjalo Amagophe amdaka ayahlula Ikhefu lokwahlula iqela liphela. Ingxelo yoNyaka ineentlobo ngeentlobo zeefomathi kwaye isibonisa indlela yokuphumeza iifoto zethu kwaye ngaloo ndlela sinike eyona ngongoma yobuqu kwikhava.
Kufuneka kuthiwe ayinayo imifanekiso yayo, ke le ngu Inxalenye yomsebenzi oza kuba lithuba lethu yenze. INgxelo yoNyaka sesona sigqubuthelo sigqibeleleyo salo naluphi na uhlobo lomsebenzi onento yokwenza neshishini okanye ishishini. Singayinika enye injongo yayo ngokusebenzisa ubuchwephesha kunye nemizobo eyahlukeneyo, kuba inenani elikhulu lokwahluka, elongeza ixabiso elikhulu kuyo yonke le pakethi yeetemplate kunye ne-mockups.
Ipakethi yeeMockups ezingama-250 kunye neetemplate zeeflaya kunye nokunye: amakhadi oshishino
Singaphantse sithethe ngokufanayo kumakhadi eshishini lawo Zisondele kakhulu kwiNgxelo yoNyaka Kwaye bajolise kulowo mthengi ufuna ikhadi elibonisayo elifanelekileyo ukusukela kwimizuzu yokuqala bexhawula izandla.
Un uyilo olucocekileyo ngombala ophambili obomvu kunye noluhlu lwemigca, kunye neemilo zejiyometri, ezikwaziyo ukwahlula ezona nkcukacha zibalulekileyo zeshishini ezinje nge-imeyile, indawo, igama lommeli kunye nelogo yenkampani.
Amakhadi oshishino akumgangatho ophezulu kunye ngefuthe elikhulu kwimbonakalo. Ngaphandle kobomvu kukwakhona eminye imibala njengombala omnyama kunye neendawo ezihlala zithanda ukukhulisa imvakalelo yokuphumla kuye nawuphi na umxhasi onokuthi afune iinkonzo zenkampani yethu.
Inani elikhulu leetemplate zamakhadi oshishino kunye ne-mockups zisibeka phambi kwe- repertoire enkulu nazo zonke iintlobo zoyilo, nangona, njengoko besesitshilo, sibona imigca egobileyo okanye egobileyo edla ngokumithisa lonke ikhadi leshishini elinomkhombandlela. Kukwanjalo nangemibala ngezo pinki, orenji, isibhakabhaka esibhakabhaka okanye iigrays eziyinxalenye enkulu yamanye amakhadi abetha kakhulu.
Amakhadi oshishino angama-59 asabonisa umgangatho omkhulu wayo yonke into ipakethi mega yeetemplate kunye ne-mockups zeeflaya kwaye ezo zihloko sihlala sijonge kuzo ngamaxesha afanelekileyo.
Ipakethi yee-mockups ezingama-250 kunye neetemplate zeeflaya kunye nokunye: ii-headers kunye neeflaya
Le yenye yeendlela zokubheja ezinkulu zale pakethe ngokuba ne Inani elilungileyo lezihloko kunye neeflaya. Kukho i-109 iyonke yokusonwabisa ngokoyilo lweshishini olunikezwe yimigca kunye nemibala ehambelana ngokuchanekileyo nomnye ukwahlula umxholo ngokufanelekileyo.
Siyaqhubeka ngengqondo efanayo yeegophe kunye neemilo ezichanekileyo kwezinye zezihloko ukubonelela yonke ipakethi ngeentlobo ezahlukeneyo. Imifanekiso ayifakwanga, kodwa esi ayisosona sizathu siphambili sokufunyanwa kwale pack, kuba into enomdla kuthi ziitemplate ukuze sizenze ngokwezifiso zethu.
Esinye isisombululo esinaso kukudibanisa ezinye zeetemplate ukuba sifumanisa ukuba into ethile yemizobo inokuba luncedo kwenye. Bahlala benombala oqhelekileyo, njengombala obomvu okanye oluhlaza okwesibhakabhaka, ke iya kutsala ngokulula kwiAdobe Photoshop ukuze uyigqithise ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye.
Iindidi zemixholo zisusela kwishishini ngezo layini kunye nesimbo sokubhala, ukuya ingaba yintoni iphepha elipheleleyo apho sinokuthi sibhengeze itheko ngesilivere kunye neetoni eziluhlaza kunye nezaselwandle, kunye nokuphela konyaka kwepati eneetoni ezifanelekileyo ezipinki. Kukho elinye lamaqela obuhle obukhulu kunye nesitayile, ngakumbi kwifonti ekhethwe kwimibala yayo.
Le pakethi ikwabandakanya iifomathi ezilula kunye noyilo oluncinci olunokufumaneka phezulu nasezantsi kwetemplate. Eyona nto intle kukuba ujonge ukuze unike ixabiso elingaphezulu kwipakethi ekuyo Isithembiso esingenakuphikiswa se-97%; efana nale ukusukela kwiintsuku ezidlulileyo.
Ipakethi yeeMockups ezingama-250 kunye neeTemplate zeFlyer kunye nokunye: iiKhadi leMockups
Elinye lamanqaku abalulekileyo ale pakethi yeeflaya kunye nokunye kukuchukunyiswa kwamakhadi oshishino. Ukuqwalaselwa komnye apho omnyama nomthubi zibalasele, ngakumbi ukunika isitayile kwikhadi leshishini elinobukho obubalulekileyo. Ilula kakhulu kwingcinga yayo, kuba umbala omnyama ubonakala ungasemva, ngelixa umphambili usebenzisa umbala omthubi kunye nokubhala okuhle ukubonisa ummeli wawo.
Eminye ifonti imnyama ukunika indawo kwiikona ezihonjiswe ngendlela encinci, kodwa ngesiphelo esihle. Le mockup iya kukuvumela ukuba udlale ngemibala eyahlukeneyo ukuyinika eyethu eyokuchukumisa; ngokungathi kwenzeka kuthi ukuba sisebenzise ikhowudi ye-QR njenge-logo kwaye ke sivumele umthengi ukuba ayiphande ngeselula yakhe. Enye yezo ntlobo zoqobo zentengiso ezithi le pakethi ye-mockups ezingama-250 kunye neetemplate zamakhadi oshishino kunye nokunye okunikezelayo.
Ipakethi yeeMockups ezingama-250 kunye neetemplate zeeflaya kunye nokunye: iileta
Sishiya nendawo encinci kwezinye iileta zomhla wokuzalwa ezizimeleyo njengempahla yoqobo. Ngepinki njengombala wobumba kunye nemvulophu eyenziwe kakuhle kuyilo ngombala opinki kwakhona kunye neethoni eqaqambileyo emthubi. Le pakethi iqulethe ezi ntlobo zokongeza zibeka icing kwikhekhe.
Ipakethi yeeMockups ezingama-250 kunye neetemplate zeeflaya kunye nokunye: iiflaya zokuhambisa
Ngamanye amaxesha kuya kufuneka utsale iindlela ngokwesiqhelo njengalezo zingaflaya ubukhulu be-A4. Ayikokwethu ukuba sizisasaze kufutshane nabantu bakudala, ezinokuthi zibekho, kodwa ukubashiya kwikhawuntara apho sinokucacisa khona iinjongo zenkampani yethu okanye iinkonzo ezibonelelwa ngumthengi othile.
Le pakethi inayo iintlobo ngeentlobo zeefomathi njengoko zihamba kathathu. Uyilo lweeflyer mockups zilandela umgaqo obekwe kuyo yonke ipakethi ukuze ungayihoyi nayiphi na inkcukacha.
Ngamafutshane, a ipakethi enkulu ye-mockups kunye neetemplate zeeflaya, amakhadi oshishino nokunye okuninzi ukuba, ngexabiso onokuyifumana ngalo, oko kukuthi, malunga ne-29 yeedola, lingaphezulu kwithuba elikhulu lokwandisa ikhathalogu yezibonelelo zearhente yakho okanye umsebenzi wakho njenge freelancer.
Ungathandabuzi kwaye Thenga zonke iitemplate ezingama-250 ngaphambi kokuba intengiso iphele
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » itemplates » Gcina ukuya kuthi ga kwi-1333 yeedola kwesi sibonelelo sikhethekileyo seetemplate ezingama-250 kunye neekhompyuter zamakhadi oshishino, iiflaya nokunye
Izixhobo zokuvelisa abaqulunqi